Equatorial Guinea Iyo Gongo Oo Barbardhac ku Kala Baxay Kulanka Furitaanka ee Koobka Qaramada Afrika – Radio Muqdisho
Kulankii furitaanka koobka qaramada qaarada Afrika ee sanadka 2015 ayaa xulka marti galinaya ee Equatorial Guinea waxa uu barbaro 1-1 ah la galay dhigiisa Congo.
Xulka Equatorial Guinea oo ka faa’iidaysanaysa ciideeda hooyo ayaa ciyaarta hogaanka u qabatay daqiiqadii 16 aad kadib markii uu Nsue u dhaliyay goolka furitaanka.
Xulka Equatorial Guinea oo marti galinayo koobka ayaa hogaaminayay qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii leysku soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay inta badan labada xul is mari waayeen,laakiin daqiiqadii 87-ad ayuu xidiga xulka qaranka Congo ee Thievy Bifoum waxa uu xulka qarankiisa u dhaliyay goolka barbaraha, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah.
Ciyaaryahan Bifoum ayaana taageerayaasha Equatorial Guinea niyad jabiyay,isagoo goolka ka dhaliyay waqtiga dhimashada ee dhamaadka ciyaarta.
Xulalka Burkina Faso iyo Gabon oo ku jiro Group-ka A ayaa sidoo kale caawo ciyaaro kulanka labaad.